Waa maxay PLA?|Haishu
PLA waa erey la soo gaabiyey oo u taagan polylactic acid waana resin sida caadiga ah laga sameeyo istaarijka galleyda ama istaarijyada kale ee dhirta ku saleysan.PLA waxa loo isticmaalaa in lagu sameeyo weel la dumin karo, dahaarka PLA-na waxa loo isticmaalaa warqadaha ama koobabka fiber-ka iyo weelasha sidii dahaye aan la dami karin.PLA waa noolaha, oo si buuxda loo burburin karo.Waxay isticmaashaa 65% tamar ka yar si ay u soo saarto caagadaha caadiga ah ee saliidda ku salaysan, waxay sidoo kale dhalisaa 68% gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo oo ka yar oo aan ku jirin wax sun ah.
Si ka duwan caagadaha sida aadka ah loo isticmaalo, polylactic acid “cag” gabi ahaanba ma aha balaastiig, taa beddelkeedana waa beddel caag ah oo laga sameeyay kheyraad dib loo cusboonaysiin karo oo ay ku jiraan wax kasta oo laga soo bilaabo istaarijka galleyda ilaa sonkorta sonkorta.Sannadihii tan iyo markii la aasaasay, faa'iidooyin badan oo badan oo PLA ah ayaa la helay kuwaas oo ka dhigaya beddel wanaagsan oo baco wasakh ah oo sarreeya.
Dib-u-cusboonaynta walxaha loo isticmaalo samaynta PLA waxay u oggolaanaysaa natiijada ugu dambaysa inay yeelato tiro faa'iidooyin oo kala duwan.
Faa'iidooyinka Isticmaalka PLA
1. PLA waxay u baahan tahay 65% ​​tamar ka yar sidii loo soo saari lahaa marka loo eego caagadaha batroolka ku salaysan.
2. Waxa kale oo ay sii daysaa 68% ka yar gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo.
3. Waxa laga sameeyay alaabta la cusboonaysiin karo iyo kuwa ceeriinka ah
4. Compostable ka dib isticmaalka
Sidee PLA uga duwan tahay Caaga?
PLA waxay u egtahay oo waxay dareemeysaa wax badan sida koobabka caagga ah ee caadiga ah - faraqa ugu weyn ee iska cad waa kan ugu fiican - WAA LA BOOSI KARO!!Inaad noqoto mid la burburin karo waxay la macno tahay inay si buuxda u burburin karto compost si ay uga caawiso beerista dalagyo cusub si ay mar kale wareegga u bilowdo.
Iyadoo PLA dib loo warshadayn karo, dib loo warshadayn karo laguma samayn karo noocyo kale oo balaastiig ah sababtoo ah waxay leedahay heerkul dhalaal hoose oo sababa dhibaatooyinka xarumaha dib u warshadaynta.Tani waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad si sax ah u tuurto PLA-gaaga!
PLA Cuntadu ma Badbaaday?
Haa!Waa ammaan gebi ahaanba in cuntada laga isticmaalo weelasha PLA.Daraasaduhu waxay ogaadeen in siidaynta kaliya ee dhacda marka cuntadu ay taabato weelasha PLA ay tahay sii deyn yar oo lactic acid ah.Walaxdaani waa mid dabiici ah oo aad u badan in laga helo cuntooyin kale oo badan.
Baakadaha JUDIN ee leh PLA
Halkaan marka la joogo JUDIN xirmooyinka, waxaan ku bixinnaa badeecooyin badan oo kala duwan oo lagu sameeyay PLA.Waxaan leenahaykoobabka la kariyo, wax lagu jarjaro sida fargeeto, mindiyo & malqacadaha oo dhan oo madow ama caddaan ah, waxaan sidoo kale haysanaacaws ka samaysan kara, sanduuqyada la soo saari karo,baaquli salad baradho ahiyo wixi la mida.
Si aad wax badan uga barato alaabtayada oo aad u aragto dhammaan alaabtayada PLA, booqo shabakadayada.